4 Na Samuel asɛm duu Israel nyinaa nkyɛn. Na Israel kɔe sɛ wɔrekohyia Filistifo ne wɔn akɔko, na wɔkɔbɔɔ nsra wɔ Ebeneser+ na Filistifo nso bɛbɔɔ nsra wɔ Afek.+ 2 Filistifo twaa mpasua+ de hyiaa Israel, na ɔko no yɛɛ den maa Israel dii nkogu Filistifo anim,+ na wokunkum mmarima bɛyɛ mpem anan wɔ akono, ɔko mpasua no so. 3 Bere a ɔman no baa nsraban no mu no, Israel mpanyimfo no kae sɛ: “Dɛn nti na Yehowa ama yɛadi nkogu Filistifo anim+ nnɛ yi? Momma yɛnkɔfa Yehowa apam adaka+ no mfi Silo mmra yɛn nkyɛn, na ɛmmra yɛn mu mmegye yɛn mfi yɛn atamfo nsam.” 4 Enti ɔman no soma kɔɔ Silo kɔfaa asafo Yehowa a ɔte kerubim+ so no apam adaka no bae. Ná Eli mmabarima baanu no, Hofni ne Finehas wɔ nokware Nyankopɔn apam adaka no ho.+ 5 Bere a Yehowa apam adaka no beduu nsraban no mu ara pɛ, Israelfo nyinaa bɔɔ ose kɛse+ ma asase wosowee. 6 Filistifo no nso tee osebɔ no, na wobisae sɛ: “Hebrifo nsraban mu osebɔ+ kɛse yi ase ne dɛn?” Akyiri yi wɔtee sɛ Yehowa adaka no na aba nsraban no mu. 7 Na Filistifo no suroe, efisɛ wɔkae sɛ: “Onyankopɔn aba nsraban no mu!”+ Ɛnna wɔkae sɛ: “Yennue, asɛm sɛɛ bi nsii da! 8 Yennue! Hena na obegye yɛn afi Onyankopɔn tumfoɔ yi nsam? Onyankopɔn yi na ɔde okum nyinaa bi kunkum Egyptfo wɔ sare no so no.+ 9 Mo Filistifo, munnya akokoduru, monyɛ mmarima na moansom Hebrifo no sɛnea wɔasom mo no;+ monyɛ mmarima na monko!” 10 Enti Filistifo no koe, na Israel dii nkogu+ maa obiara guan kɔɔ ne ntamadan mu;+ wokum wɔn okunkɛse paa,+ na Israel mmarima mpem aduasa a wɔnam fam totɔe.+ 11 Onyankopɔn adaka no nso, wɔfae,+ na Eli mma baanu no, Hofni ne Finehas, wuwui.+ 12 Benyamini bi fi mpasua no so tuu mmirika baa Silo da no ara; ná wasuan n’atade mu,+ na ɔde dɔte agu n’atifi.+ 13 Bere a odui no, na Eli te agua so wɔ kwankyɛn rehwɛ kwan, efisɛ nokware Nyankopɔn adaka no nti na ne bo ntɔ ne yam.+ Na ɔbarima no kɔbɔɔ amanneɛ kurow no mu, na kurow no nyinaa bɔɔ bena. 14 Na Eli tee benabɔ no, na obisae sɛ: “Hooyɛ a mete yi ase ne dɛn?”+ Na ɔbarima no yɛɛ ntɛm sɛ ɔrekɔbɔ Eli amanneɛ. 15 (Ná Eli adi mfe aduɔkron awotwe, na n’aniwa ayɛ kusukusu ma onhu ade.)+ 16 Na ɔbarima no ka kyerɛɛ Eli sɛ: “Mene nea ofi mpasua so bae no; mpasua no so na mifi guan bae nnɛ.” Ɛnna obisae sɛ: “Me ba, asɛm bɛn na asi?” 17 Na ɔbɔfo no buae sɛ: “Israel aguan Filistifo anim, na ɔman no adi nkogu kɛse;+ wo mmabarima baanu no, Hofni ne Finehas, awuwu,+ na nokware Nyankopɔn adaka no nso, wɔafa.”+ 18 Bere a ɔtee nokware Nyankopɔn adaka no ho asɛm ara pɛ, ofi n’agua so tew faa n’akyi hwee fam, kurow pon no ho, na ne kɔn mu bui ma owui efisɛ na wabɔ akora na ne mu nso yɛ duru; ná wabu Israel atɛn mfe aduanan. 19 Saa bere no, na ne sew, Finehas yere anyinsɛn, na n’awo reyɛ adu. Bere a ɔtee sɛ wɔafa nokware Nyankopɔn adaka no, na ne sew barima ne ne kunu nso awuwu no, ɔkotow sɛ ɔrewo efisɛ awo kaa no+ amonom hɔ ara. 20 Bere a ɔrewu no, mmea a wogyinagyina ne nkyɛn no kae sɛ: “Nsuro, efisɛ woawo ɔbabarima.”+ Nanso wammua, na wamfa ne koma ankɔ so. 21 Ɔtoo abofra no din Ikabod,+ na ɔkae sɛ: “Anuonyam afi Israel kɔ nkoasom mu.”+ Nokware Nyankopɔn adaka a wɔafa ne ne sew barima ne ne kunu nti na ɔkaa saa.+ 22 Enti ɔkae sɛ: “Anuonyam afi Israel kɔ nkoasom mu+ efisɛ wɔafa nokware Nyankopɔn adaka no.”+